Kooxda Liverpool oo heshiisyo cusub ka saxiixanaysa Labo ka mid ah xiddigaheeda muhiimka ah – Gool FM
(Liverpool) 22 Mar 2020. Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay dhameystiri doonto qandaraasyada cusub ee ay ka saxiixanayso xidigaheeda muhiimka ah ee Alisson iyo Virgil Van Dijk.
Labada xiddig ayaa door muhiim ah ka ciyaaray bandhiggii Liverpool ee xilli ciyaareedkii 2019-20, inkastoo tartankoodii ugu horreeyay ee ay ugu guuleystaan horyaal Premier League uu hakiyey caabuqa faafaya ee Coronavirus.
Sida laga soo xigtay 90Min, labada ciyaaryahan ma aysan soo bandhigin wax damac ah oo ah inay ka tagaan Anfield, waxaana taasi ay keentay inaysan jirin wax ku deg deg ah oo labadaan laacib heshiis cusub looga saxiixo.
Warbixinta ayaa sidoo kale sheegaysa inay wadahadallo kula jireen goolhayaha iyo daafaca dhexe ilaa iyo sanadkii hore, Reds ayaa la sheegayaa inay ku dhow dahay inay heshiis ka saxiixato labadan ciyaaryahan, kuwaas oo ay u aragto kuwa ugu wanaagsan ee ka dheela garoonka Anfield.
Si kastaba Alisson oo ah goolhayaha koowaad ee kooxda Liverpool ayaa tan iyo markii uu ku soo biiray kooxdan wuxuu u saftay 58-kulan, halka Van Dijk oo ah daafaca ugu wanaagsan kooxda u saftay 81-kulan tan iyo markii uu naadigan yimid.